Isikhathi: Uhlelo Lokusebenza Lokuthumela Imiyalezo Oluvulekile | Kusuka kuLinux
Ngenxa yezindaba eziningi eziphindiwe mayelana Ukuba sengozini kweWhatsApp okwaziwayo noma okungenzeka kube khona, enye yezinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni, ngabantu ngabanye nezinhlangano, abaningi bafuduke ngokufana noma ngokuphelele, isikhathi eside kwezinye izinhlelo zokusebenza ezinconyiwe njenge yocingo y Isignali.
En KusukaLinux, asijwayele ukukhuluma ngakho WhatsApp, kusukela Akuyona i-Free noma i-Open Source Software. Ngokuvamile senza lokhu ukubhekisa ku- ukuba sengozini noma ukuqhathanisa nabanye, ikakhulukazi izixazululo zamahhala nezikhululekile. Njengamanje, sizokhuluma ngakho Session, ekhuthazwa njenge- uhlelo lokusebenza lwemiyalezo evikelekile yomthombo ovulekile.
Mina uqobo ngiyekile ukusebenzisa WhatsApp Ukuqala ngokuphelele kule nyanga kaFebhuwari 2020, ngoba angikaze ngiyisebenzise, ​​futhi ngaphandle kwalokho, kudle idatha eningi nesikhala sediski, phakathi kwezinye izinto ezingezinhle. Bengilokhu ngisebenzisa kakhulu iminyaka emi-3 yocingo futhi manje impela uthanda indawo yokuxhumana futhi / noma uhlelo lokusebenza lwemiyalezo yeselula nedeskithophu.
1 Nciphisa noma ugweme ukusetshenziswa kwe-WhatsApp
2.1 Kuyini lokhu?
2.2 Izici eziyinhloko
2.3 Ukufaka ku-GNU / Linux
Nciphisa noma ugweme ukusetshenziswa kwe-WhatsApp
Kepha, ngale kwalezo zizathu, ukukhathazeka kwangempela kwezokuphepha noma izizathu, okukhonjiswa ngabantu noma izinhlangano emhlabeni wonke, kufanele kucatshangelwe. Isibonelo, maqondana ne- WhatsApp, kuvele izindaba ezinokwethenjelwa ezivela ezinhlanganweni ezinjenge:
"Ikhomishini yaseYurophu icele abasebenzi bayo ukuthi baqale ukusebenzisa iSignal, uhlelo lokusebenza lwemiyalezo ebethelwe kuze kube sekugcineni, ngemizamo yokwandisa ukuphepha kokuxhumana kwabo. Imiyalelo yavela emabhodini okuthumela imiyalezo yangaphakathi ekuqaleni kukaFebhuwari, yazisa abasebenzi ukuthi "Isiginali ikhethiwe njengesicelo esinconyiwe sokuthumela imiyalezo esheshayo emphakathini." Uhlelo lokusebenza luthandwa yizishoshovu zobumfihlo ngenxa yokubethela kokuphela kokuphela nobuchwepheshe bemithombo evulekile.". Abezombusazwe - 23/02/2020
"Inhlangano Yezizwe Ezihlangene bayalele izikhulu zabo ukuthi zingasebenzisi i-WhatsApp ukuxhumana. Lapho ebuzwa ukuthi ngabe uNobhala-Jikelele we-UN u-Antonio Guterres ukhulumile yini ne-Saudi Crown Prince noma omunye umholi womhlaba esebenzisa i-WhatsApp, okhulumela i-UN uFarhan Haq uthe ngoLwesine: Izikhulu eziphezulu ze-UN ithole imiyalo yokungasebenzisi i-WhatsApp, ayisekelwa njengendlela ephephile". I-Reuters Medium - 23/01/2020
Futhi ngenxa yezizathu eziningi, imininingwane, izizathu noma izindaba njengoba unjalo, manje sekuyinto entsha isicelo semilayezo wenza indlela yakhe ngokusebenzisa umphakathi, ikakhulukazi umthandi we- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, ucingo Session.
Ngokuya ngonjiniyela bayo kufayela layo le- Iwebhusayithi esemthethweni, ikakhulukazi ku- "Iphepha Elimhlophe" (Amaphepha amhlophe):
"Session ngumthombo ovulekile, uhlelo lokusebenza lomlayezo ovikelekile olususelwa kukhiye womphakathi olusebenzisa isethi yamaseva wokugcina asetshenzisiwe kanye nephrothokholi yomzila we-anyanisi ukuthumela imilayezo ebethelwe yokuphela kokuphela ngokuvezwa okuncane kwemethadatha yomsebenzisi. Ikwenza lokhu ngenkathi inikeza izici ezijwayelekile zezinhlelo zokusebenza eziyinhloko zemiyalezo".
Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza olwenziwe yi- Inkampani yeLoki, inhlangano edalelwe ukuthuthukisa imikhiqizo yeSoftware egxile kwezokuphepha nobumfihlo babasebenzisi bayo.
Kungumthombo ovulekile wokuthuthuka.
Kuyinto isicelo esiphambanweni (iWindows, iMacOS, iLinux, i-Android ne-iOS).
Yamukela ukuthunyelwa kwemilayezo yezwi nokunamathiselwe kumafomethi amaningi.
Isebenzisa ukubethela kokuphela kokugcina okususa ukuqoqwa kwemethadatha ebucayi.
Ivumela izingxoxo ngamaqembu abantu abangafika kwabangu-10 noma iziteshi zamalungu ezingenamkhawulo.
Ayiqophi imethadatha, njengoba ingagcini, ilandelele noma iqophe imethadatha yemilayezo.
Idizayinelwe ngokukhethekile ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme lobumfihlo nenkululeko, lapho kunezinhlobo zamanje zokubhekwa.
Inokuvumelanisa kwamadivayisi amaningi, okungukuthi, isebenzisa i-ID yeseshini yefoni nekhompyutha yomsebenzisi.
Isebenza ngokwakhiwa kwama-akhawunti angaziwa ngokuphelele, ngakho-ke, ayikho inombolo yocingo noma i-imeyili edingekayo ukudala i-ID yeseshini.
Ukufaka ku-GNU / Linux
Mayelana ne- Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux, Session inikeza ifayili lokufaka ngefomethi I-AppImage cishe 125 MB, okwamanje equkethe ifayela le- inguqulo ezinzile 1.0.2. Isizathu sokuthi kungani, ukufakwa kuzoba lula kakhulu futhi kuzohambisana nokuhanjiswa kwethu okuningi kwamanje. Ngoba Android, Iseshini - Isithunywa Esizimele, iyatholakala kunguqulo 10.0.3, enobukhulu be- 20 MB futhi lokho kudinga uhlobo lwe I-Android 5.0 noma ngaphezulu.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Session», uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwemiyalezo evulekile evulekile, enezici ezibalulekile futhi ezifanayo nezinye izinhlelo zokusebenza ezithandwa kakhulu zemiyalezo, inentshisekelo enkulu futhi ilusizo, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isikhathi: Uhlelo Lokusebenza Lokuthumela Imiyalezo Oluvulekile
umbiko obonakalayo kusho
Njengoba kwasungulwa ama-smartphones cishe akunakwenzeka ukuthi kulandelwe, futhi manje nge-monopoly ye-Facebook (WhatsApp, Messenger, IG, njll.) Sakha idatha enkulu kakhulu.
Phendula ekubikeni kwangempela
Ukubingelela, i-VirtualReport. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Ngiyavuma ngokuphelele.
Ngingathanda ukuba yingxenye yalesi siteshi solwazi ukuthi sibuyekezwe nezindaba ngoba ngithola isoftware ithakazelisa….
Kubukeka kuthakazelisa, yize kunento engihlale ngifuna ukuyazi ukuthi isicelo sibhalwa kanjani ku-GNU / Linux, ngoba lapho base-Electron (uhlaka lwesoftware) futhi amakhompyutha amadala athatha iminyaka ukuyiqala. Kungakuhle futhi ukwazi ukuthi ngabe ukuxhumana okuqhubekayo nomakhalekhukhwini kuyadingeka yini njengoba kwenza iSignal, okuyinto engenakwenzeka ngokubuka kwami.
Bengisafuna ukwazi futhi ngizozama ukuthi heh heh. Ozithobayo.
Ngiyabingelela, Babhele. Kuzoba wusizo impela ukwazi lokho, kepha hhayi ku-Whitepaper yayo noma esigabeni sayo se-FAQ kukhombisa ukuthi yenziwe nge-electron ngendlela ecacile noma esobala. Ngokuphathelene nokunye, ngicabanga ukuthi ngokusebenzisa ukuvumelanisa kwamadivayisi amaningi nangokusebenzisa ama-akhawunti angaziwa ngokuphelele angaxhomeki enombolweni yocingo, ngoba akukho ukuxhumana okuqhubekayo nomakhalekhukhwini. Kepha kuzofanele ukuthi uhlole lokho kahle ukuze ubone ukuthi kusebenza kanjani.
Uke wazibona izimvume zokufaka eziceliwe ku-Android? kukhishwe ngokuphelele.
IProtonmail isebenza kuhlelo lokusebenza lwemiyalezo, lokho kuzoba okuhle 😉
UJose Marin kusho
Phendula uJose Marin
IMicrosoft imemezele ukutholakala okujwayelekile kwe-Azure Sphere
I-GIMP 2.10.18 ifika ngokuqoqwa kwamathuluzi, ukulungiswa nokunye